Nootropics PRL-8-53: Kuvandudza Ndangariro Uye Kugona Kugona?
Nootropics PRL-8-53: Zvinonyatso Kuvandudza Ndangariro uye Kugona Mano?
Hype ye PRL-8-53 se psychoactive mushonga unoteedzera kumashure mukutanga kwema1970. Nikolaus Hansl, purofesa paCreighton University, zvakangoitikawo kuti akawana nootropic paanenge achishanda paaminoethyl meta benzoic acid esters.
Kubva payakatanga, ichi chekuwedzera chave chidzidzo chimwe chete uye kutongwa kwevanhu. Kuongororwa kwekiriniki ndiko kwaive humbowo hwekupedzisira hwekuti PRL-8-53 yekudzidza inovandudza ndangariro dzenguva pfupi uye kutaura kwakatsetseka.
PRL-8-53 haina kugashira FDA kuvimbiswa, asi chinhu chisina kurongwa muUS. Iwe unogona kuita zvakasununguka kuita PRL-8-53 kutenga seinopfuura-the-counter drug.
Chii chinonzi PRL-8-53?
PRL-8-53 inotora benzoic acid uye benzylamine. Sayenzi, inozivikanwa se3- (2- (benzyl (methyl) amino) ethyl) benzoate.
Kubva mukupera kwema1970, PRL-8-53 anga ari ese hasha semushonga wepfungwa wekusimudzira mashandiro ehuropi. Zvirinani, kune muyedzo wakabudirira wevanhu unotsigira kushanda kwawo. Kunze kwezvo, PRL-8-53 wongororo paReddit inotsigira kushanda kweiyi yekuwedzera mukuvandudza ndangariro uye kudzidza.
Purofesa Hansl pakutanga akawana izvozvo PRL-8-53 nootropic inowedzera kurangarira kwenguva pfupi uye kurangarira kwemashoko. Nekudaro, mushonga uyu zvakare unoverenga kushushikana, kushushikana, kushushikana, uye kuneta.
PRL-8-53 mashandiro ekuita
Nekuda kwekushomeka kwekutsvagisa zvidzidzo paPRL-8-53, chaiyo maitiro ekuita imwe nzira isinganzwisisike. Zvisinei, masayendisiti anofungidzira kuti mushonga unosimudzira huropi hunoshanda munzira nhatu.
PRL-8-53 nootropic activates iyo secretion yeacetylcholine, inova mukuru neurotransmitter, inotarisirwa kushanda ndangariro nekudzidza.
Uyu mushonga wepfungwa unoshandawo pane iyo dopaminergic system nekumisikidza hutano dopamine mazinga. Chii chimwe, kutora PRL-8-53 kushushikana zvinodhaka zvinokanganisa kuwedzeredza kweserotonin. Izvi zvinogadzira mabhodhoro ematanho ekugadzirisa kunetseka, kushushikana, uye kushaya hope.
Inowedzera Mano Ekudzidza
PRL-8-53 powder inoratidza kuvandudza kugona uye kugona kudzidza. Iyo yekuwedzera inokonzeresa kuyeuka kweruzivo, mazwi, uye akasiyana mazano. Naizvozvo, chave hyped yekudzidza mushonga pakati pevadzidzi vanoda kufamba nemuyedzo wakaoma.
PRL-8-53 yekudzidza inogona zvakare kuvandudza kutarisisa, kunyanya kana uchiedza kubata pfungwa nyowani. Vamwe vema psychonauts vanoti kutora ichi chakangwara chinokuchengetedza panzira, uye haungazonetseki uchitsanangura zvinhu zvitsva. Aya maPRL-8-53 mabhenefiti anogona kunge ari mambakwedza matsva kune vanhu vane hunyanzvi avo vari kukwikwidza kumwe kuyedza kwakaomarara bvunzo dzefizikisi kana bvunzo dzemumuromo.
Imwe yemakiyi PRL-8-53 mhedzisiro inosanganisira kukurudzira ndangariro. Iyo nootropic inomutsa acetylcholine uye iyo dopaminergic system, izvo zvakakosha pakuziva.
Mune kiriniki yekuyedza inosanganisira 47 nyaya dzehutano, purofesa Hansl akataura kuti avo vakatora PRL-8-53 vakaita zvirinani mukuyeuchidza bvunzo kupfuura vatori vechikamu pane placebo. Kunze kwezvo, ndangariro iyi inogona kugara kweinenge vhiki.
Asati aedza zvidzidzo zvevanhu, Hansl akange aona kuti PRL-8-53 inobatsira makonzo ekurangarira mhedzisiro. Iyo yekuwedzera inoita murine modhi yekurangarira nekubatanidza mhinduro kune inoshungurudza mamiriro.
Inovandudza Kukurudzira uye Kunoderedza Kuneta
PRL-8-53 kushushikana kwemishonga inoratidzira dopaminergic zvivakwa. Iyo kemikari inowedzera chiitiko che dopamine, kemikari yehuropi iyo inokanganisa kukurudzira, kuwedzera mweya, uye kupera kuneta. Naizvozvo, inokurudzira hutano hwepfungwa, uine mukana wekurwisa kusagadzikana kwepfungwa senge ADHD uye schizophrenia.
Kunyangwe paine yakanaka PRL-8-53 mhedzisiro, haufanire kushandisa nootropic sechikamu chemushonga wako wekurapa. Ichi chigadzirwa hachina kuitirwa kurapwa kana kurapwa kwezvirwere.
Nzira yekutora sei PRL-8-53?
Zvakajairika PRL-8-53 chipimo chemushonga iri pamusoro pe5mg pazuva, inotorwa seyekuwedzera yemuromo. Kunyangwe paine kushomeka kutsvagisa kwekumisikidza yakachengeteka dhosi renji, yekutanga kutongwa kwevanhu yakashandisa 5mg. Kufuratira kuburikidza nezvimwe zvePRL-8-53 wongororo inosimbisa kuti vamwe vashandisi vanofarira vanotora zvakaringana 10mg kusvika 20mg yeiyo yekuwedzera.
Kana iwe urikupa iyo yekuwedzera iyo-pfupi-yenguva ndangariro yekuumbwa, senge pakutora bvunzo, ita shuwa yekuishandisa maawa maviri pamberi peicho chaicho chiitiko.
PRL-8-53 nootropic inowanikwa muhupfu, piritsi, uye mafomu emvura. Iwe unogona kusarudza kumedza iyo piritsi kana kuiwedzera kune chako chinwiwa; chero chipi chakanakira iwe. Kunyangwe iwe uchikwanisa kusarudza zvemitauro midiki manejimendi, iyi nzira inogona kunge ichikanganisa rurimi rwako. Vazhinji vashandisi vangasarudza kutora PRL-8-53 nemuromo.
Parizvino, hapana akakodzera PRL-8-53 stack kurudziro. Iko kungangoita kudyidzana kwechikamu ichi nemamwe madhiragi anoshanda hazvizivikanwe. Kunze kwezvo, PRL-8-53 ine yakasimba potency, uye nekudaro, hazvina basa kuti uibatanidze pamwe neyekuyeuchidza-kukurudzira nootropics.
Isu hatikurudzire kana kukurudzira chero PRL-8-53 stack. Zvirinani, zvingave zvakanaka kana ukasazvishingisa nemishonga yekuchenjera ine mhedzisiro yakafanana. Kunyangwe ichi yambiro yakasimba, vamwe vashandisi mukati memunharaunda yepfungwa vanoona kuti kuisira PRL-8-53 poda neAlfa-GPC, piracetam, IDRA-21, uye theanine inovapa mabhenefiti ekurapa.
Pane chero mhedzisiro mhedzisiro yePRL-8-53?
Parizvino, hapana akanyorwa PRL-8-53 mhedzisiro. Izvo chete zviripo zviwanikwa zvinodzokera kuma1970s panguva yemakiriniki uye epamberi miedzo yenootropic. Mukudzidza kwevanhu, vatori vechikamu havana kuratidza zviratidzo zvakashata pamutero we5mg pazuva.
Kunyangwe pasina makiriniki PRL-8-53 mhedzisiro pane rekodhi, ita shuwa yekuchengetedza yakaderera doses. Zvinoenderana neongororo yegonzo, huwandu hwakawanda hweiyi yekuwedzera inokanganisa kufamba.
Kune zviitiko zvisingaverengeki zvevashandisi paReddit uye chitoro cheAmazon zvine chekuita nemhedzisiro ye PRL-8-53 kushushikana nootropic.
Tarisa uone mamwe ePRL-8-53 ongororo;
Kudzidza nekurangarira kupuruvha
“Ini ndinoshandisa PRL-8-53 zvakanyanya chero pandinenge ndiine hurukuro dzekudzidzira nemusoro. Kunoita musiyano mukuru mukukurumidza kwandinoita kubata nemusoro zvinhu. ”
“Ndakaona kuwanda kwematauriro nePRL pachangu. Yakabatanidzwa ne caffeine, chishandiso chikuru chekudzidza. ”
PRL-8-53 Chipimo chemushonga
“Ndakatanga nemari shoma uye ndakashanda kusvika pauwandu hukuru. Ini zvechokwadi ndinonzwa kuti 10mg idhizaini huru yezuva nezuva… Zvisinei, ndakafunga kuyedza 20mg neChishanu kuitira bvunzo yangu yeNeuroscience uye ndakashamiswa nekusimudzirwa kwekurangarira… ndakanzwa kuti madhayeti mahombe akanyatsobatsira pakuyeuka uye aive rubatsiro rwakakura pakuedzwa . ”
"Ndinoitora mangwanani pandinozomuka (11am) neNoopept, L-theanine, bupropion, vortioxetine, uye tianeptine ... Hazvibviri kunyatsoziva zviri kuita chii nemutoro unorema kwazvo wemishonga maererano nekomedown…"
“Parizvino ndiri kuita IDRA-21 nePRL-8-53 mazuva ese. Ndiri kufarira combo, uye inoita kuti kubata nemusoro uye kunzwisisa pfungwa nyowani zvive nyore. ”
“Kufanana nemitauro yakawanda, inonaka zvisingaiti. Zvisinei, haina kushata seNoopept… ichaitawo kuti rurimi rwako rureruke nguva dzekutanga… mabhenefiti acho anokunda kuravira. ”
PRL-8-53 Side Migumisiro
“Ndakaona ndangariro dzakaipisisa mushure mekunge maitirwo apera kunyangwe nemadosi madiki. Mushure mekupedzisira chipimo chemushonga, ndakave nemanzwiro asinganzwisisike, uye asina kugadzikana. ”
Anonymous mushandisi anoti;
"Pamadhigiramu ari pamusoro pe30mg nemuromo uye 15mg zvishoma, ndakarwadziwa nemusoro uye zvisingaite maererano nemaonero angu."
PRL-8-53 powder inovimbisa nootropic iyo inoramba isina kuongororwa munzvimbo yesainzi. Humbowo chete hunobatika hwekuita kwayo hwakareba semakumi mashanu emakore. Nekudaro, vanoshingairira neurohackers vari kubhengi pairi seyakasimba ndangariro inosimudzira ine mashoma PRL-8-53 mhedzisiro.
Iyo yekuwedzera inokodzera kwenguva pfupi-yekurangarira. Ruzivo rwakaunganidzwa kubva kune vane ruzivo vashandisi uye zviripo zvekutsvagisa zvidzidzo vanoona izvozvo PRL-8-53 kushushikana mushonga unovandudza ndangariro kusvika ku200%.
Iko kudyidzana kweiyi nootropic nemimwe mishonga ichiri chakavanzika. Naizvozvo, kuchengetedzeka kwayo uye kushivirira hazvizivikanwe. Saka, kuyedza PRL-8-53 stack hachisiwo chisarudzo. Bvunza chiremba wako usati watora PRL-8-53 pamwe chete nemimwe mishonga yemishonga.
Unogona kugadzira PRL-8-53 kutenga muupfu kana fomu yepiritsi se nootropic supplement.
Hansl, NR, & Mead, BT (1978). PRL-8-53: Kuwedzeredzwa kudzidza uye kuchengetwa kunotevera muvanhu semhedzisiro yemadosi emuromo eiyo nyowani psychotropic mumiriri. Psychopharmacology (Berl).
Hansl, NR (1974). Inoverengeka spasmolytic uye CNS inoshanda mumiririri: 3- (2-benzylmethylamino ethyl) benzoic acid methyl ester hydrochloride.
McGaugh, JL, & Petrinovich, LF (1965). Migumisiro yemishonga pakudzidza nekuyeuka. Ongororo Dzepasi Pose yeNeurobiology.
Kornetsky, C., Williams, JE, & Shiri, M. (1990). Kutarisisa uye kukurudzira zvinokonzeresa zve psychoactive zvinodhaka. NIDA Ongororo monograph.
Giurgea, C. (1972). Pharmacology yekubatanidza chiitiko chehuropi. Kuedza pane nootropic pfungwa mune psychopharmacology. Chaicho Pharmacol (Paris).
Hindmarch, I. (1980). Psychomotor basa uye psychoactive zvinodhaka. British Zvinyorwa zveKiriniki Pharmacology.
RAW PRL-8-53 PODHA (51352-87-5)
2. Chii chinonzi PRL-8-53?
3.PRL-8-53 mashandiro ekuita
4. Kubatsirwa kwePRL-8-53
5.Nzira yekutora sei PRL-8-53?
7. Kune chero mhedzisiro yePRL-8-53?